News Collection: म लेस्बियन होइन - रेखा
म लेस्बियन होइन - रेखा
आखिर अहिलेकी नम्बर एक नायिका रेखा थापालाई त्यस्तो के पर्‍यो ?जसले भन्नुपर्‍यो— होइन म त्यस्तो -लेस्बियन) होइन। मेरा केटी साथी कम नै छन्। अँगालो मारेर हिँड्ने केटी साथी त झनै कम छन्। यो अदालतमा दिइएको जवाफ होइन, न त लेस्बियनको आरोपमा कुनै युवतीसँगै पक्राउ परेर प्रहरीलाई टिपाइएको साविती बयान नै हो। यति मात्र होइन, रेखाले लेस्बियन होइन भन्ने प्रमाण जुटाउन शिशु जन्माउनु आवश्यक नभएको तर्क पनि गरेकी छिन्।
रेखाको यो भनाइ उनको हालसालै सार्वजनिक भएको चलचित्र 'अन्दाज' लाई हिट बनाउन पनि आएको होइन, किनभने रेखालाई आफ्नो चलचित्र हिट बनाउन चलचित्र नै राम्रो बनाउनुपर्छ, उपद्रया कुरा गरेर चलचित्र हिट हुँदैन भन्ने कुरा राम्रैसँग थाहा छ। त्यसो भए रेखा लेस्बियन हुन् भन्ने शंका किन र कसरी उत्पन्न भयो त ?
नेपाल चलचित्र पत्रकार संघका अध्यक्ष विदुर गिरीले यौन र रोमान्समा रेखाको 'प्यासिभ' जवाफ सुनेपछि प्रश्न गरेछन्- तपाईंको नीरसता सुन्दा तपाईं पनि लेस्बियन त ? रेखा भन्छिन्- म लेस्बियन र गेेहरूलाई सम्मान गर्छु। म एभ्री टाइम सुटिङमा हुन्छु, थकित भएर घर र्फकन्छु। यस्तो स्थितिमा म त्यस्तो -यौनसम्पर्कको ?) मुडमा हुन्छु त ? भनेपछि यौनसम्पर्कको मुडमा नहुनु लेस्बियन हुनु होइन।
त्यतिमात्र कहाँ हो र ? रेखा रानी अझ खुलेर भन्छिन्- अहिलेको जेनरेसन धेरै एडभान्स भैसकेको छ। अहिले यौनसम्पर्क सामान्य भैसकेको छ। जमानाअनुसार विवाहअघिको यौनसम्पर्क पनि सामान्य नै मानिन थालिएको छ। कुनै युवतीको युवकसँग त्यस्तो सम्बन्ध भएन भने लेस्बियन हो कि भनेर शंका हुने भैसक्यो। यद्यपि उनी यौनसम्पर्कमा ह्याबीचुयल छैनन्। उनको दृष्टिमा यौनसम्पर्कको 'लत' राम्रो होइन। अर्थात् रेखाको दृष्टिमा भने त्यस्तो सम्बन्ध सामान्य भए पनि केटा फेर्दै हिँड्दा चरित्रमै दाग लाग्न सक्छ, तर उनी लेस्बियनचाहिँ हुँदै होइनन्।
आएको होइन, किनभने रेखालाई आफ्नो चलचित्र हिट बनाउन चलचित्र नै राम्रो बनाउनुपर्छ, उपद्रया कुरा गरेर चलचित्र हिट हुँदैन भन्ने कुरा राम्रैसँग थाहा छ। त्यसो भए रेखा लेस्बियन हुन् भन्ने शंका किन र कसरी उत्पन्न भयो त ?